टैटू – आध्यात्मिक दृष्टिकोण
१. टैटू – एक परिचय
२. टैटूमा आध्यात्मिक अनुसन्धान
३. सारांशमा– आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट टैटू बारेमा व्यावहारिक सुझावहरु
आजकल धेरै मानिसहरुको लागि टैटू, व्यक्तिगत, प्रतीकात्मक, सौन्दर्यात्मक, पारम्परिक अथवा सांस्कृतिक महत्व छन् अथवा उनको व्यक्तित्वको पहिचान हुन्छ । आजकल सबै आयु तथा वर्गको महिला तथा पुरुष दुबैको आधुनिक जीवन शैलीमा टैटूले एउटा विशिष्ट स्थान प्राप्त गरेको छ ।
हामी सबैले कुनै एउटा छनमा कुनै विशेष टैटूको कलाकृतिको प्रशंसा गरेको थियो होला अथवा स्वयंको त्वचामा टैटू बनाउने निश्चय पनि गरेको थियो होला । तर, आध्यात्मिक स्तरमा टैटूबाट हुने हानिकारक परिणाम प्रति हामी सचेत छौनौं । त्वचामा टैटू बनाएपछि के हुन्छ, यो बुझ्नको लागि SSRF ले टैटूमा आध्यात्मिक अनुसन्धान गर्यो ।
साधक श्रीमती. योया वाले (अब (पू.) योया वाले) जसको छटौं इन्द्रिय प्रगत छ, उहाँले टैटूको आध्यात्मिक परिणाममा अनुसन्धान गर्नुभयो । उहाँले सूक्ष्म-ज्ञान मा आधारित चित्र पनि बनाउनु भयो । विशुद्ध-चक्र को स्थानमा टैटूबाट हुने परिणाम हामी सूक्ष्म-ज्ञान मा आधारित यो चित्राबाट बुझन्न सक्छौं ।
आध्यात्मिक दृष्टिकोणले, टैटूले हामीमा हानिकारक परिणाम हुन्छ । टैटूको हानिकारक परिणाम निम्नलिखित कारणले हुन्छ :
कोही व्यक्ति आधुनिक प्रचलन (फैशन) को कारण आफ्नो त्वचामा टैटू बाउँछन् । त्यसले त्यस स्थानमा मोहिनी शक्ति पनि आकर्षित हुन्छ । परिणामस्वरूप बाह्य संसारबाट आसक्ति अनि भावनात्मकता बढ्ने अथवा मायिक भ्रम बढ्दछ ।
टैटूको अधिकतर कलाकृति सात्विक हुँदैन । परिणामस्वरूप टैटू कष्टदायक शक्तिलार्इ कार्यरत गर्दछ ।
टैटूको आकृति वातावरणमा कष्टदायक शक्तिको मात्रा बढाउछ जसले व्यक्तिलार्इ शारीरिक अनि आध्यात्मिक स्तरमा विचलित गरिदिन्छ । यसको साथै व्यक्तिको देहको आसपासको कालो शक्तिको आवरण १.५% सम्म बढेर जान्छ ।
व्यक्तिको त्वचामा टैटूको कारण अनिष्ट शक्ति द्वारा व्यक्तिको देह, मन अनि बुद्धिमा प्रभाव पार्ने सम्भव हुन्छ ।
टैटू देहमा उष्णता बढाइ दिन्छ । देहमा उष्णता बढ्नु देहमा रज-तम बढ्नुको सूचक हो । (चिसो बढ्नु देहमा सत्व गुण बढ्नुको सूचक हो )
अरुलार्इ टैटू देखाउदा अहं बढ्दछ ।
टैटूमा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त केही जान्न योग्य महत्वपूर्ण सूत्र :
आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट त्वचामा टैटूले कुनै फार्इदा गर्दैन ।
टैटू शरीरमा स्थायी रूपले रहुन्छ, यस्तो अवश्थामा व्यक्ति यदि साधना गर्दैन भने अनिष्ट शक्तिको कष्ट हुन सक्छ ।
यदि कसैले पहिलानै टैटू बनाएको थियो भने सबै भन्दा राम्रो नियमित साधना गर्नुहोस् । साधनाले टैटूबाट हुने हानिकारक परिणामबाट स्वयंलार्इ रक्षा गर्दछ ।
व्यक्ति जसरी-जसरी आध्यात्मिक प्रगति गर्दछ देहसँग सम्बन्धित महत्व उनको लागि कम हुन थाल्छ ।